शरीरको रक्तसंचार प्रणालीलाई निशाना बनाउँदै कोरोनाभाइरस, के यो नयाँ लक्षण हो ? – Media Np Online
मुख्य पृष्ठ /News/शरीरको रक्तसंचार प्रणालीलाई निशाना बनाउँदै कोरोनाभाइरस, के यो नयाँ लक्षण हो ?
काठमाडौं। कोरोनाभाइरसले मानिसको श्वास प्रस्वास प्रणालीलाई क्षतिग्रस्त बनाएर मानिसलाई मृत्युसम्म पुर्याउने मानिएका बेला यो भाइरसको नयाँ किसिमको आक्रमण भेटिएको छ । यो भाइरसले रहस्यमय तरिकाले मानव शरीरको रगतलाई नै जमाइदिएको पाइएको छ । अहिलेसम्म यो भाइरसको आक्रमण श्वासप्रश्वास प्रणालीमा हुने बुझाइको विपरित यसले रत्तरसंचार प्रणालीलाई निशाना बनाउन लागेसँगै चिन्ता बढेको छ ।
कोरोनाभाइरसले रक्तसंचार प्रणालीलाई निशाना बनाएका केसहरु अमेरिकामा ठूलो परिमाणमा भेटिएका छन् । अमेरिकाको अटलान्टा प्रान्तको एमोरी युनिभर्सिटीको स्वास्थ्य सेवाको अधिनमा पर्ने १० अस्पतालमा शरीरमा रगत जमेर मृत्यु भएका कैयौं केस भेटिएका छन् । डाक्टरहरुले बिरामीको शरीरमा यस्तो किन भइरहेको छ भन्ने बुझ्न सकिरहेका छैनन् । द वाशिङटन पोस्टका अनुसार अटलान्टाका यी १० अस्पतालका आइसीयू विभागका प्रमुख डा. क्रेग कूपरस्मिथले यो ठूलो समस्या भएको बताएका छन् ।
डा. कूपरस्मिथले अन्य अस्पतालमा सोध्दा त्यहाँ पनि यस्ता केसहरु पाइएको बताए । उनले यो क्रम लगातार बढिरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । डा. कूपरस्मिथका अनुसार कुनै अस्पतालमा २० प्रतिशत, कुनैमा ३० र कुनैमा ४० प्रतिशतसम्म बिरामीको मृत्यु रगत जमेका कारण भएको पाइएको बताए । डा. कूपरस्मिथले भने ‘यो संकट तीब्र गतिमा बढिरहेको छ । हामीँग यसलाई रोक्ने कुनै तरिका छैन । रोक्ने तरिका त त्यतिबेला खोजिन्छ जब कारण बुझ्न सकियोस् ।’
डा. कूपरस्मिथका अनुसार एक महिना अगाडिसम्म डाक्टरहरुलाई आफूहरु कुन रोगसँग लड्दैछु भन्ने थाहा भएकोले उनीहरु आत्मविश्वासी थिए । त्यतिबेला कोरोनाभाइरसले मुख्य गरी फोक्सो त्यसपछि मृगौला, कलेजो, मुटु, मस्तिस्क र पेटमा असर गरिरहेको थियो । तर अब यसले रगतलाई निशाना बनाइरहेको छ । उनका अनुसार रगत जम्ने समस्याको उपचार मेडिकल विज्ञानले अहिलेसम्म पत्ता लगाउन सकेको छैन । अहिलेसम्म रगत पातलो बनाउन बिरामीलाई थिनर दिने गरिएको छ । तर, कोरोनाभाइरसको केसमा थिनरले पनि काम गरिरहेको छैन ।
सामान्य रुपमा डाक्टरहरुले अहिलेसम्म पत्ता लगाएअनुसार पहिले कोरोनाभाइरसका बिरामीको शरीरमा अक्सिजनको मात्रा कम हुन्छ । त्यसपछि बिरामी बेहोस हुन्छन् वा उनीहरुलाई हृदयाघात हुन्छ । तर, रगतमा आइरहेको यो परिवर्तनलाई डाक्टरहरुले अझैसम्म बुझ्न सकिरहेका छैनन् । डाक्टरहरुका अनुसार बिरामीको रगत जेलजस्तै गाढा भइरहेको छ । त्यसपछि रगत कडा हुँदै गइरहेको छ । आम रुपमा रगत जम्ने समस्या इबोला, डेंगु र अन्य प्रकारका हेमोजेरिक ज्वरोमा देखिन्छ । कोरोनामा यस्तो लक्षण पहिलोपटक देखिएको छ ।